Valaam Island, etholakala enyakatho yeChibi Ladoga e Karelia, bekulokhu ezithakazelisayo izivakashi abeza kule ndawo agodliwe njalo ngonyaka njalo. Lapha uzothola ubuhle eyingqayizivele nature: inhlanganisela amawa kodwa emahlathini kaphayini, amachibi eziningi noMsindisi-isimo Valaam Monastery. Thinta izindaba wonke umuntu can, ngoba umkhumbi kuBalami uya ngokuvamile. Ibanga ukusuka Saint Petersburg ukuba Valaam kuyinto 210, futhi kusukela ogwini enyakatho Lake Ladoga engafinyelelwa angabacwasi ngokushesha, ngoba ibanga kulesi siqhingi km 18 kuphela.
Ezinye izazi-mlando ziyavuma ukuthi igama lalesi siqhingi kusho ephakeme. By endleleni, in the leziqhingi kukhona yayincane, kodwa esiqhingini okusezingeni eliphezulu - Skitsky: ukuphakama salo 58,2 m kunjalo cruise ukuze Valaam - kungcono ithuba elikhulu ukuba nomuzwa wokuthi luyingxenye yemvelo yamadwala, amatheku, iziqhingi, sisebunzimeni futhi ihlathi lezihlahla. . Kulesi nhlanganisela eyingqayizivele abakwazi ukuqhosha resort ngamunye! Kukholakala ukuthi Valaam Monastery yasungulwa ngesikhathi ngombhabhathiso yeRussia baya St Herman uSergiyu. Ekhulwini xv Isigodlo yayibizwa ngokuthi Lavra Omkhulu. sokuthuthwa kwempahla Isigodlo babe eminyakeni 1839-1917. Namuhla, lesi eziyinkimbinkimbi izivakashi ezivela emhlabeni wonke.
It lungatholakala ngezindlela eziningana kulesi siqhingi ongcwele. Ethandwa kakhulu, ukhululekile, kodwa hhayi ezishibhile - isikebhe ukuba Valaam kusukela Petersburg. Lokhu kuhilela uhambo cruise ku gumbi (le ngezinga elithile incike yentengo ithikithi) yesidlo. Intengo ithikithi sihlanganisa ezihlukahlukene hambo nokuzijabulisa. Ezinye imizila adinga stop, isibonelo, Konevets Island, Sortavala noma Svirstroy, kodwa izenzakalo ezinjalo akufakiwe.
Indlela yesibili - ukuya esiqhingini kwi meteorite kusukela Priozersk. Umzila ka pilgrimage ihlelwe inkonzo Valaam Monastery. ama-pilgrim Okokuqala ukuhamba ngebhasi e Priozersk - kuthatha ngamahola amathathu kwedlule, ikhambo ke leli qembu libizwa kuwo kwi Meteor kanye uhambo lokuya emsebenzini ngehora kulesi siqhingi.
Yikuphi round Pick
izinkampani Izikhangibavakashi zinikeza amathuba ukuvakashela kulesi siqhingi edume. Njengoba sekushiwo, indlela elula kakhulu - lokhu isikebhe ukuba Valaam umzila, isibonelo, Petersburg, Valaam, Petersburg, eyenzelwe olulodwa futhi ubusuku obubili. Kulesi Uhambo uzoba:
Petersburg, wenziwa ukubhalisa izivakashi, bese umkhumbi uya egudle uMfula iNeva iChibi Ladoga. Phakathi nalesi sikhathi izivakashi balinde kwakusihlwa, izinhlelo ezihlukahlukene umculo.
8 ekuseni - ukufika esiqhingini e Nikon sika Bay. Lapha, izivakashi siyonikwa uhambo esemzileni ku Monastery Bay, kusukela lapho emuva izimali ezengeziwe kungenziwa esafinyelelwa ngesikebhe esincane. Ngosuku lwesibili izivakashi siyonikwa uhambo Isigodlo - vakashela Isibonakaliso yesonto, sezindela engadini, sezindela emathuneni, kanti isimo Cathedral. It azonikezwa isikhathi samahhala, bese uzothola uhambo esigodlweni sezindela Valaam.
Morning - babuyele esiteshini emfuleni eSt.
Bhalamu Ungathola endizeni, futhi ngasiphi isikhathi sonyaka. Nokho, le ndlela wokujikeleza akuhlali kutholakala. Njengomthetho, ibhanoyi ukwazi ukubona abantu abangu-20 ngesikhathi esifanayo noma ngabe isibalo izivakashi ilungelo akumelwe lingabi nawo, indawo ahlengwe. Izikhangibavakashi kulesi siqhingi kusuka eMoscow okwesikhathi eside - ngesonto, ngakho-ke kulula futhi ashibhile ukuze uthole Petersburg, futhi usuke lapho uye uthole esikebheni kuBileyamu.
Njengengxenye ukuvakasha isikebhe ukuba Valaam ngo-September, izobiza:
On the isikebhe emphemeni gumbi intengo - 8700 (double) futhi ruble 10,500 (owodwa).
On emphemeni phakathi ukubaluleka simi ngale ndlela: polyulyuks Double - ruble 11.200, gumbi eyodwa - ruble 10100, kabili - ruble 8400 ...
Amathikithi kwi emphemeni main - 8000 ruble ngayinye gumbi double.
On emphemeni aphansi gumbi kathathu izobiza ruble 7000.
Uma ukhetha ngomkhumbi kuBhalamu, ithikithi izintengo zifaka phakathi yokuhlala sihlale, kathathu ngelanga, dinner ukuhamba kusihlwa, yonke kufakwe ukuvakasha uhambo nokuzijabulisa izinhlelo.
Tour ukuba Kizhi futhi Valaam
Thola esiqhingini ngcwele ngokwenu kukho izinkambo eziningana ezihlinzekwa yesimanje tour opharetha. Ngokwesibonelo, cruise eside phezu isikebhe ukuba Valaam ngohlelo enwetshiwe - lena indlela "Petersburg-Svirstroy-Kizhi, Petrozavodsk Mandrogi-Saint-Petersburg". Lolu hambo yakhelwe izinsuku 6/5 nobusuku obungamashumi amane. Ukuhamba - kusukela Petersburg kuze idina esikebheni. Khona-ke, izivakashi ukuza Valaam, lapho elinde ukuhamba uhambo hermitages, le farmstead emaphakathi, ngokuvakashela Cathedral, uhambo Monastery Bay. Iqembu wabe eseya Lodeynoye Pole, lapho uhambo ibhasi Monastery Aleksandra Svirskogo kuzokwenziwa. Okuvelayo Unforgettable ukunikeza uhambo ku Kizhi - isiqhingi ukuthi siqukethe izakhiwo esiyingqayizivele XVII-XIX eminyaka. Indawo lapho uya olandelayo - Petrozavodsk futhi ukuhamba ngayo, bese iqembu uzoyeka e retroderevne Mandrogi. Khona-ke, lo mkhumbi wabuyela Petersburg. Izindleko lolu hambo ngeke ruble 17370 ngayinye oyedwa.
Kuyini ezithakazelisayo esiqhingini Valaam
Ibalazwe ikhombisa ukuthi ndawo incane uma kuqhathaniswa impela eningi izindawo azinake. Yiqiniso, isici esikhanga kakhulu nge yalesi siqhingi - kungcono isimo Cathedral. Ngaphambili, lapho yayiyisikhungo zamukelwa kabanzi ezinkolweni, futhi manje lezindela mayelana 200 izindela. Ngezenzo uvuselela ukuphila e zezindela. Okuwukuphela asebenzayo okwamanje - Uvuko Isigodlo, izindlu Pilgrim Service Isigodlo, elalinikezelwe inhlangano hambo azungeze lesi siqhingi. Lapha, phezulu eNtabeni Yeminqumo, kuba Chapel of kweNyuka, okuyinto linikeza umqondo wayo kakhulu Amancane Nikon sika Bay.
Njengomthetho, inkathi pilgrimage esiqhingini ivulekile phakathi kokudlulisela inkumbulo iholidi we izinsalela St Nicholas futhi Nicholas Skete amaholide. Kwakuphakathi nalesi sikhathi ayabaluleka hambo eyayithandwa Valaam esikebheni. By the way, izinga lokushisa lapha kuyaqabukela okusezingeni eliphezulu ngenxa imimoya njalo uthule, ngakho kufanele uthathe izingubo ezifudumele.
Uhambo kuya uBhalami usebenza kusuka May kuya ku-October, ngesikhathi Petersburg engafinyelelwa ngezindlela eziningana. izinkampani Modern travel ukunikela ongakhetha eziningana imizila. Ethandwa kakhulu - uhambo ukuze Valaam ngesikebhe kusukela Petersburg, kodwa abaningi banesithakazelo, futhi ngempelasonto izinkambo, ezifana Valaam, Kizhi futhi Valaam-Mandrogi. Ungakhetha futhi eside Cruises, futhi esiqhingini kukhona amahhotela lapho ungahlala. Okokuqala, it is a ehhotela yesigodlo. Okwesibili, kuneminyango ehhotela unyaka wonke "Winter", "Penthouse" nangokuthi "wesigodlo." Ningahlala kuso idolobha lamatende - leli holide sasimthanda labo abakhetha ukuzizwa eduze ngangokunokwenzeka ukuze imvelo. Lapha unga futhi abe isidlo, futhi ehlobo esiqhingini kukhona amathilomu eziningi, lapho nawe ungadla ngokugcwele.
Uhambo ezidumile isiqhingi
Kumila ubhekwa uhambo indawo ye isimo Cathedral kanye egcekeni maphakathi. Ifakiwe ezinhlwini cishe yonke Cruises. Iphinde njalo wavakashelwa St Nicholas sezindela esiqhingini St Nicholas. Uma kukhona isikhathi, umhlahlandlela inikeza ukuvakashela amathuna le wesigodlo sika. Ngaphandle Uhambo evamile esiqhingini ungavakashela Museum, esisogwini echwebeni Monastery Bay, obomvu izimpawulo, esiteshini Meteorological etholakala lapha. Ungakwazi ukuqasha isikebhe ubuke uhambo azungeze lesi siqhingi - kuba izobiza ruble 2000.
Guides bathi kuyiwe yokuhlala ekhona kumele kwenziwe ikhumbula imithetho neziqondiso zendlela yokuphila lezindela, ngokulandelana, abanye wokubhoda ukuvakasha kungenzeka kukhanselwe kuncike empilweni yesigodlo.
Hermitages uBhalami: Kuyini ekhethekile
Njengengxenye uhambo Uvuko Skete izivakashi kuqala bayakhuthazwa ukuvakashela yaseGetsemane, bese iqembu antante eNtabeni Yeminqumo kuya Chapel of Ascension. Ekupheleni nohambo ungavakashela ipulazi sezindela bese zithokozise ubisi kubanjwa nezinkwa ezazisanda kubhakwa. Njengengxenye izinkambo emfuleni zivame abamenyiwe ukuvakashela izinqaba, okuyinto yayisalokhu e iCape abomvu. Nasi limnandi, bay ethule ngoba ngokuvumelana iziteshi enamadwala. izivakashi eziningi zithi izivikelo bheka ezinjengendle ku ngemuva bemvelo, kodwa zibonisa nokuthi ekuphileni kwethu ahlalisane obubi nokukhanya.
Ngakho, uma ufuna ukuba agcobhoze ukwakheka kanye nomlando ngesikhathi esifanayo, uhambo Valaam - yindlela enhle yokukwenza. Khetha emfuleni Cruises, ngoba ukuthi iyona engcono kunazo ungathola izikhala bomdabu evulekile Russia futhi usondela nemvelo.
Njengoba lisetshenziswe utshani puppeteer utshwala?